कसरी जन्माउने स्वस्थ्य र आकर्षक बच्चा ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalकसरी जन्माउने स्वस्थ्य र आकर्षक बच्चा ?
Home स्वास्थ्य कसरी जन्माउने स्वस्थ्य र आकर्षक बच्चा ?
कसरी जन्माउने स्वस्थ्य र आकर्षक बच्चा ?
कतिले यसैपाली विवाह गरे होलान् । कति फेमेली प्लानिङको तयारीमा होलान् । विवाहपछि आफ्नै कोखको बच्चा हुर्काउने रहर हुन्छ, दम्पतीलाई ।
जब गर्भ रहन्छ, मन शान्त भने हुँदैन । अनेक उथलपुथल हुन्छ । आफ्नो बच्चा कस्तो होला ? स्वस्थ्य होला ? यस्ता जिज्ञासा उठ्छ । यही जिज्ञासाले मनलाई बेचैन बनाउँछ । निश्चय पनि आफ्नो गर्भमा कस्तो बच्चा हुर्कदैछ भन्ने कुराको निक्र्यौंल गर्न गाह्रो हुन्छ ।
यद्यपी गर्भ रहेदेखि नै केही कुरामा सर्तकता अपनाउने, सजग हुने, खानपान र दिनचर्यालाई सन्तुलित राख्ने हो भने धेरै हदसम्म ढुक्क हुन सकिन्छ, जन्म लिने बच्चा स्वस्थ्य हुनेछ ।
हुन त गर्भाधान प्रक्रियाबाटै दम्पतीले विशेष सर्तकता अपनाउनुपर्छ वा तयारी गर्नुपर्छ भनिन्छ । जब हामी बच्चा जन्माउने योजना तय गरेर शारीरिक क्रिया गर्छौं, त्यही विन्दुदेखि दम्पतीले अनुशासित जीवन अपनाउनुपर्ने मान्यता छ । किनभने दम्पतीले गर्ने कतिपय गल्तीले गर्भको बच्चालाई असर गर्छ । नतिजा, बच्चा जन्मजात कुनै शारीरिक विकार बोकेर आउँछ । त्यही विकारले ति बच्चालाई जीवनभर सताउँछ । उसले पूर्ण स्वस्थ्य जीवन विताउन सक्दैन ।
एउटा अबोध, बेकसुर बच्चालाई रोगी बनाउने काम खासमा आमाबुवाबाट नै हुन्छ । जानेर होस् वा नजानेर, आमाबुवाले त्यस्ता गल्ती गर्छन् जो गर्भको बच्चालाई भार बन्छ ।
गर्भमा हुर्कने बच्चाको स्वास्थ्य उनको आमासँग जोडिएको हुन्छ । आमाले भोग्ने अप्ठ्यारा, गर्ने गल्ती सबैको प्रभाव गर्भको बच्चामा पर्छ । त्यसैले गर्भावस्थामा दम्पतीले धेरै कुरामा सर्तकता अपनाउनुपर्छ ।
गल्ती के हुन्छ भने, अक्सर दम्पती पारिवारिक जीवनमा राम्ररी एडजस्ट नहुँदै बच्चा जन्माउने तयारी गर्छन् । यस्तो अवस्थामा दम्पतीबीच मनमुटाव, ठाकठुक पर्छ । उनीहरु भनाभन गर्छन्, झै-झगडा गर्छन् । यसको सोझो प्रभाव गर्भको बच्चालाई पर्छ ।
गर्भवतीको मनमा पैदा हुने वेचैनी, आवेग, आक्रोस, पीडा, वेदनाले समेत गर्भको बच्चालाई असर गर्छ । त्यही कारण गर्भ रहेदेखि नै महिलाले मनलाई शान्त तुल्याउनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ । सकारात्मक हुनुपर्छ ।
श्रीमती जब गर्भवती हुन्छे, श्रीमान्ले आफ्नो दायित्व बोध गर्नुपर्छ । श्रीमतीको गर्भबाट जन्म लिने बच्चा दुबैको हो । त्यसमा दुबैको समान हक लाग्छ । दुबैले त्यसबाट उत्तिनै सन्तान सुख प्राप्त गर्छन् । तर, गर्भमा बच्चा हुर्काउनुपर्छ महिलाले । प्रसव पीडा सहनुपर्छ महिलाले । ज्यानको बाजी लगाउनुपर्छ महिलाले ।
महिला त्यसैपनि संवेदनशिल हुन्छन् । आफ्नो गर्भमा बच्चा हुर्काइरहँदा उनीहरुको मनोदशा कस्तो हुन्छ होला ? त्यसमाथि परिवारले उनको भावना बुझिदिएन भने ? उनलाई आत्मिय साथ र सहयोग मिलेन भने ?
एक महिलाका लागि आमा हुन वास्तवमै कठिन काम हो । यस्तो अवस्थामा उनको मनोभावलाई बुझ्ने सबैभन्दा नजिकको मान्छे भनेका श्रीमान् नै हुन् । यसर्थ श्रीमान्ले आफ्ना श्रीमतीको सुख र खुसीका लागि आवश्यक बन्दोबस्ती मिलाइदिनुपर्छ ।
श्रीमतीलाई कस्तो वातावरण दिने ? कसरी खुसी तुल्याउने ? कसरी शान्त राख्ने ? कसरी उनको मनबाट भय हटाउने ? यी सबै कुरामा श्रीमान्ले खास भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
गर्भवतीको स्वास्थ्यसँग गर्भमा हुर्कने बच्चाको स्वास्थ्यको गहिरो प्रभाव रहनछ । साथै गर्भवतीको सोंच-चिन्तनले पनि गर्भको बच्चामा प्रभाव पार्छ । यो तथ्यलाई बुझेर श्रीमान् तथा उनका घर परिवारले यस्तो माहौल तयार गरिदिनुपर्छ, जहाँ गर्भवतीले उन्मुक्त रमाउन सकोस् । सधै खुसी र शान्त रहन सकोस् ।
गर्भवती तनावरहित हुनुपर्छ । यसका लागि ध्यान, प्राणायाम जस्ता विधी पनि उपयोगी हुन्छ । यसका लागि श्रीमान्ले प्रेरित गर्न सक्छन् । गर्भावस्थामा गरिने केही योग आसन र व्यायाम हुन्छन् । नियमित व्यायामले गर्भवतीको स्वास्थ्य राम्रो बनाउँछ । यसका साथै खानपान पनि स्वस्थ्य, सन्तुलित, पोषकयुक्त हुनुपर्छ । अप्राकृतिक खानेकुराबाट बच्नुपर्छ । पर्याप्त पानी पिउने, आरम गर्ने, गहिरो निद्रा लिने जस्ता कार्यले पनि गर्भवतीको स्वस्थ्य राम्रो हुन्छ ।
सन्दीप आवद्ध टोली मेलबर्न बिग बास लिगको फाइनलमा पराजित